Labo Shariif iyo Gaas oo maanta Muqdisho kula kulmay Ergayga midawga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda. – Radio Daljir
Agoosto 28, 2012 1:06 b 0
Muqdisho, Aug 27 ? Wafti ballaaran oo ay hoggaaminaysay haweenayda ugu sarraysa arrimaha dibadda ee dalalka midawga Yurub Catherine Ashton, ayaa maanta timid magaalada Muqdisho, kuwaasi oo kulan wakhti kooban qaatay la yeeshay madaxda sarsare dawladda xilligeedu dhammaaday ee federaalka.
Catherine Ashton, wakiilka midawga Yurub, iyo madaxda federaalka ayaa ka wada-hadlay arrimo muhiim ah oo la xiriira xaaladda haatan uu waddanu marayo ee siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo arrimaha dhammaystir dadaallada looga hayaamayo kumeel-gaarnimada.
Catherine Ashton, ayaa madaxda la kulmay uga mahadcelisay sidii ay ugu soo dhabar-adaygeen hawlihii adkaa ee horyaallay xilligii cayinnaa ee lagu jaan-gooyey qorshaha Tubta-hayaan ee Road-mapka, kaasoo guulo wax-ku-ool ah laga gaaray badankiisii.
M/weynaha xilligiisu dhammaaday ee Shariif Axmed, oo warfidiyeennada u faahfaahiyey kulanka iyo arrimaha lagu meeleeyey, ayaa sheegay dhammaan waxyaabihii la isla soo qaaday in la isla fahmay.
Shariif, waxaa uu intaasi ku daray Catherine Ashton in ay ballan-qaaday midawga Yurub in ay sii wadi doonaan tallaabooyinkii lagu taageerayey dawladda, ayna la garab taagnaan doonaan wixii kalaan-kooda ah ee ku aaddan gacan qabashada dawladda Soomaalida.
Imaatinka Catherine Ashton ee magaalada Muqdisho, ayaa ku aadaysa iyadoo berri lagu wado in la doorto afhayeenka baarlamaanka, uuna jiro is-maandhaafsanaan u dhaxaysa saddexda mas?uul ee ugu sarreeyey dawladda wakhtigeedii jiritaan dhammaaday.